Ko Europe inogona kuchengetedza mamiriro ezvinhu here? - TELES RELAY
HOME » pasi rose Ko Europe inogona kuchengetedza mamiriro ezvinhu here?
Ko Europe inogona kuchengetedza mamiriro ezvinhu here?
Kwemakore ose e5, vagari veEurope vanosarudza vamiririri vavo Paramente yeEurope. Imwe nheyo yeEurope iyo inosarudzwa nezvose zvakakwana, inoshanda separamende mune imwe nyika yezvematongerwe enyika: vedare vari mubato rekuvhota mazano eEuropean Union.
Kusiyana, ndeyekuti aya mazano achafanirwa kushandiswa munyika imwe nhengo yeEuropean Union. Nokusayina zvibvumirano zvinotsigira kupinda kwavo muUnited States, nyika dziri kutarisirwa kuisa mutemo weEurope, iyo inofanirwa kushanda. Saka mutemo weEurope unotora nzvimbo inonyanya kukosha, sezvo iri pamusoro Mutemo weFrance, uye unobatsira zvikuru pamutemo wenyika.
Hatiiti kuti tione izvozvo, asi magwaro mazhinji akavhota muParamende yeEurope anonyatsobata muupenyu hwedu hwezuva nezuva. Somuenzaniso? ari RGPD. Yakaparadzanisa mabhokisi enyu emareji gore rapera, sezvo mawebsite uye mahofisi ose awakaparadzira dheta aifanira kuenderana nemutemo uyu mutsva.
Nhungamiro yemazuva ano pamusoro pemhuka: kuvhiringidzwa kwepurasitiki inoshandiswa kubva ku2021. Votedzwa muna March 2019, chinangwa chayo ndechokudzivirira kubudisa uye kutengeswa kwezvinhu zvisina kushandiswa zvepurasitiki zvakadai semashizha, zvigunwe, mabhegi ekutenga, cotton swabs kana kawaini!
Europe uye zvakatipoteredza: nhau isati ichangobva kuitika
Sei zvakakosha kuvhota musarudzo dzeEurope kana iwe uchinzwa uchitarisana nechikonzero chezvakatipoteredza? Kana tichitaura pamusoro peEurope uye nezvakatipoteredza, ndezvekuti yakagara iri kupayona panyaya yacho : Kubvira makore e70, mitemo nemapurogiramu anotarisa kuchinja kwemugumo uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvakatanga kuiswa muEuropean.
80% yemitemo yeFrance pamusoro pezvakatipoteredza ndeyomunharaunda. Nguva yemberi yezvakatipoteredza muFrance uye yese yeEurope inopinda muParamende yekuEurope.
Muna 1997, European Union yakabatanidza munharaunda dzayo mutemo wekusimudzira nekusimudzirwa kwezvakatipoteredza sezvinodiwa kune zvose zvinotungamirirwa nemitemo uye zviito zveEuropean Union.
Kubva kare 1972, Europe inoshanda nekuda kwezvakatipoteredza, nekunyora kuda kwayo kugadzira chirongwa chekuita kune mitemo yezvakatipoteredza panguva yeParis Summit. Nhungamiro dzakawanda dzakagamuchirwa panguva iyo: basa ravo nderokutarisa kutarisira kwedhaka, kusvibiswa kwemhepo kana huwandu hwemvura munyika dzakasiyana-siyana.
Nhasi, chiito cheEuropean Union mumunda wezvakatipoteredza chinotora maitiro kuburikidza nacho UPENYU + chirongwa, chinangwa chekubhadhara nekutsvakurudza kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye zvipenyu. Purogiramu inotsigira mapurogiramu akawanda uye NGOs kushanda kupikisa kupisa kwenyika.
Uyezve, yake "energy-climate" chirongwa, yakagamuchirwa mu2008, chinangwa chekudzikisa kupisa kwemafu emhepo munzvimbo dzose 40% Mirima States ne 2020. Mukuwedzera pakurwisana nemamiriro ekushandurwa kwemamiriro ekunze, iyi yepamutemo "purogiramu" inotarisira kuisa mutemo unowanikwa wehupenyu husingaperi:
27% inogona kuwedzerwa simba mune simba rinosanganiswa ne2020,
Kuwedzera 20% simba rakakwana muEuropean Union
Iko kusanganiswa kwe simba, chii ichocho?
Kusanganiswa kwesimba inzira dzakasiyana-siyana umo simba rakadai semagetsi rinobudiswa munzvimbo inopiwa (mafuta, mashala, mhepo, hydro, nyukliya, nezvimwewo)
Asi mitemo iyi yose haina kukwana: kunyange nanhasi, kufambira mberi kwakawanda kunoramba kuchiitwa kunatsiridza kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza muEuropean Union.
Saka kupayona, Europe ichiripo nanhasi 25 mamiriyoni ematanda epurasitiki gore negore. Uye maererano neEuropean Environmental Agency, kupfuura 400 000 vanhu akafa nguva isati yakwana nekuda kwekusvibiswa kwemhepo muEuropean Union mu2018.
VeEurope uye mamiriro ekunze: chii chinowanikwa mu2019?
Nokuda kwemasarudzo aya, nyaya yezvakatipoteredza ndiyo nyaya inokosha: vagari vemuAfrica vanowanzotandudzirwa mune zvematongerwo enyika muEuropean Union, iyo inoratidzwa pamapurogiramu ezarudzo.
Maererano nehurongwa hwePSOS hwakarongedzwa pakati pevato vanogona kusarudzwa mumasarudzo eEurope, zvishoma 80% Vakapindura vanoda kuvhota vachifarira mapato ekutanga nyaya dzezvakatipoteredza mumapurogiramu avo. Uku kuunganidza kune dzimwe nyika kune mamiriro ekunze, kuwedzera uye kuonekwa, kunoratidza kuti vanhu vanonzwa vachiwedzera uye vane hanya.
Kufanana nemusikana wechiSweden anoshanda Greta Thunberg, inozivikanwa kuti inotsigira chikonzero chezvakatipoteredza muSweden uye munguva yeCOP24, vagari venyika vakawanda vane zvikumbiro izvi, izvo zvinotora nzvimbo yakawanda muhurukuro yevanhu muEurope.
Nhasi, kunyange zvakadaro, vanopfuura rimwe chete muEurope vagari vemo vanozvidzivirira kumisarudzo dzeEurope. Mukusarudzwa kwekupedzisira kwe2014, kubvisa kwepabonde kwaive 57,57%, inenge iine 20% yakakwirira kupfuura makore 30 apfuura.
Chii chinotsanangura izvi kusagadzikana? Pakati pekusazvipira uye kusawirirana kwevanhu vanobva kuEurope mazano, uye pfungwa yakawanda yekushaya rubatsiro mukutarisana nezvematongerwo enyika, pane zvikonzero zvakawanda zvevanhu veEurope kuti vasiye kubva pakasarudzwa.
Eparamende yeEuropean inoratidzika kure kure nekufungisisa kwedu zuva rega rega. Asi, iyo inzvimbo ine uwandu hwakawanda kune dzimwe nyika, uye izvozvo zvinogona kuita kusiyana.
Nhasi, zvipingamupinyi zvikuru kune mutemo weEuropean Union ndeye kudzivira dzimwe nyika dzenhengo apo kuvhota muParamende: kusarudza masangano anokonzera zvinokonzerwa nezvinokonzerwa nemamiriro ezvakanaka inzira yakanaka yekubvumira magwaro ezvakatipoteredza kuvhota nekukurumidza.
Chimwe chingave chakakanganisika: icho cheimwe lobbies, iyo iyo mapato ezvipoteredza asingaiti nguva dzose muParamende. Ikozvino zvinyorwa zve glyphosate ndeimwe yemuenzaniso unonyanya kutaura, sezvo ichange yakatungamirira mukuvandudzwa kwemvumo yekushandisa pesticide kwemakore 5, kusvika ku2022. Uye nokuda kwechikonzero chakanaka: mareji emakambani ekutengesa muchengeti wekusafukidzira wakanga ane zvikwereti zvinoshandiswa kuedza kuedza.
Vote nokuda kwoutachiona: ndiani anotsanangura chii?
MuFrance, yevhoti yeEurope yakanyanyogadzirisa: France ndeimwe yenyika dzakasimirirwa zvikuru muParamende yeEurope! Ne Brexit, hexagon inopiwa 79 zvigaro pa 751, uye inouya yechipiri seri kweGermany, iyo ine 96. Chimwe chikonzero chekutora chikamu munyaya. Zvigaro zvakagoverwa kune vamiririri veDare States maererano nehuwandu hwavo Nyika yakafanana neFrance, iyo ine vanhu vanopfuura mamiriyoni gumi nemamiriyoni, ichavawo nemapurezidenti akawanda kupfuura nyika yakafanana neDenmark, iyo ine mamiriyoni evanhu vane 60.
Zvigaro muParamende yeEurope, zvakasiyana nesarudzo dzeparamende dzeFrance, dzinoparidzirwa zvakaenzana. Mushure mokuvhota, sangano rimwe nerimwe rakawana zvinopfuura 5% yevhoti anowana nzvimbo dzakawanda maererano nehuwandu hwevhoti. Izvi zvinobvumidza kuratidzwa kwakanaka kwezvido zvemagariro ehurumende, uye kunopa mapoka mashoma mukana wekugara muParamende.
Nokuda kwevhoti iyi, mapato akawanda ezvematongerwo enyika anoita kuti zvisikwa zvive nyaya huru pamushandirapamwe wavo. Muenzaniso we LREM, iyo inoisa Pascal Canfin, aimbova mutungamiriri wenyika yeWWF, panzvimbo yechipiri pane zvaakanyora, inokosha.
"Pamusoro pemisoro yose yezvakatipoteredza, Paramende yeEuropean inokosha. Hazvisi pasina kuti 80% yemitemo yezvakatipoteredza yatinoshanda muFrance inobva kuEurope. Amai vehondo, aripo. - Pascal Canfin
Rwendo rweRRR runodzivirirawo glyphosate exit kubva pano 2021 (pesticide yakanga yavandudzwa nokuda kwe5 mu2017), uye kuderedza kushandiswa kwemishonga inouraya inoparadza nemaviri ne2025. Inogadzawo chinangwa chokubvisa mahedrocarboni ne2050.
Yannick Jadot, musoro wekutsvaga Europe Ecology The Greens, inomupa kugadziriswa kwechibvumirano chitsva pane zvakatipoteredza, izvo zvinofanirwa kuisa kune dzimwe nyika nhengo mitemo ine simba kukurudzira mitemo yekudzivirira zvakatipoteredza. Pakati pevamwe, EELV inodawo simba 100% inogona kudzorerwa zvakare kubva pano 2050.
La France Insoumise, iyo inotakura chirongwa chekugadza murau weEurope mukuda kwezvisikwa, ec "Mutemo weGreen" : inopa kukosha kwe " kwete kutora zvisikwa zvipfeko zvinodzokodzwa zvakare kupfuura zvingagona kuzadzikisa, kana kubereka zvinopfuura zvisikwa zvingatakura Uye kugadzirisa kweEurope energy inopikisana neSangano reParis. Ichi chibvumirano chepasi rose, chakatanga kushanda pakuguma kwe2016, chinonyanya kunyanya chinangwa chekuchengeta pasi peC2 degrees kupisa kwepasi ne 2100.
The list LR inoratidzira rutivi rwayo zero carbon chinangwa ne 2050, uye runyora PS zvinokonzerwa nelahle uye diesel ne2030.
Kunyange zvazvo dzimwe dzezvivimbiso zvekusarudzwa dzimwe nguva dzichiita sedzinonyanya kuda, asi zvakadaro dzinoratidzika sechichienda kune chinangwa chekuchinja mumutemo pamusoro pezvakatipoteredza: kuchine zvakawanda zviri kuitika muEurope yenyika, uye zviri mumasarudzo remangwana reEurope mazano pamusoro pezvisikwa zvipenyu uye mamiriro okunze!
Tsamba inokosha kubva kuna Robin, Web Editor - Vendeur-energie.com
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://lewouri.info/leurope-peut-elle-sauver-lenvironnement/
Switzerland: Ropafadzo dzinofanirwa, Caritas inobva kunyika shanu
India: Rahul Gandhi: Congress yakaparadza pfungwa yaNarendra Modi | India News